खुट्टा बाँउडिने गर्छ ? यसो गरे हुन्छ राहत
काठमाण्डौँ, चैत्र २९ ।
खुट्टा बाउडिने समस्या कहिलेकाही सबैलाई हुने गर्छ । तर यस्तो किन हुन्छ ? कहिले विचार गर्नु भएको छ । खुट्टाको तिघ्रानिर वा पिँडौँलाको मासु पल्टनुलाई हामी बोलचालको भाषमा बाउँडिनु वा खुट्टा फर्किनु भन्छौँ ।
खुट्टा बाउँडिदाँ अत्यन्त पिडा महशुष गरिन्छ । प्रायः राति खुट्टा बाँउडिने गर्छ । एक्कासी तिघ्रा र पिँडौलाको मासु खुम्चिन गई राति अथवा आराम गरेको बेला यस्तो हुन्छ । तिघ्राबाहेक खुट्टाको पैताला तथा शरीरका अन्य भाग पनि बाउँडिने गर्छ।
याद गर्नु भएको छ भने थाहा होला पल्टिएको ठाँउमा मासुको डल्लो जम्मा हुनुका साथै दुखाइको महसुस हुन्छ। तिघ्राको मासु पल्टने अवधि केहि समयदेखि धेरै मिनेटसम्म हुने गर्छ। दुखाइ कम भएपछि एकैठाउँ डल्लो परेको मासु ठिक ठाउँमा आउन केही समय लग्छ। यस्तो समस्या प्राय सबै उमेर समुहकालाई देखिने भएपनि बुढाबुढीमा अधिक हुन्छ ।
खुट्टा फर्किने वा बाउँडिने समस्याको यकिन कारण नभएपनि पोषक तत्वको अभावले पनि यस्तो हुने गर्छ । शरीरलाई आवस्यक पर्ने सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम आदि आवश्यक मात्रामा उपलब्ध नहुँदा मासु पल्टिने गर्छ। यी पोषक तत्वहरूले स्नायुको सन्देश लैजान, मासु खुम्चाउन तथा मासुको कार्य राम्रोसँग गर्न सहयोग गर्छन्।
सोडियममा सकारात्मक आयोन हुन्छ जसले गर्दा स्नायुको सन्देश लैजान र मासु खुम्च्याउन सहयोग गर्छ भने क्याल्सियमले मासु खुम्च्याउन र स्नायु सन्देश निकाल्न सहयोग गर्छ। पोटासियमले सोडियम र क्लोराइडसँग मिलेर विद्युतीय सन्देश निकाल्न स्नायु र मासुलाई सहयोग गर्छ।
त्यस्तै म्याग्नेसियमले मासु खुम्चँदा चाहिने शक्तिमा स्थिरता ल्याउन सहयोग पर्‍याउँछ। त्यस्तै शरीरमा भिटामिन बि १२ को कमि हुँदा पनि राति खुट्टा पल्टिन्छ।
यसैगरि लामो समयसम्म उभिएको बेला पनि यस्तो समस्या भएको हुन सक्छ । अग्ला हिल लगाउँदा र खुट्टामा नमिलेको जुत्ता लगाउँदा मासु थाक्न गई खुटृा बाँउडिने गर्छ । सन् २०१२ मा इर्गोनमिक्समा प्रकाशित एक अध्ययनले लामो समयसम्म उभिनु खुटृा पल्टनुको एउटा महत्वपुर्ण कारण भएको उल्लेख गरेको छ ।
साथै बस्दा अप्ठेरो भएमा वा सुताइमा अफ्टारो भएमा पनि खुट्टा बाउडिने गर्छ । शरीरमा प्रयाप्त मात्रामा पानी नहुदाँ पनि यस्तो हुने हुदाँ पानी कम पिउनेले बढि मात्रा यस्तो समस्या भोग्ने गर्छन् । शरीर तथा दिमागलाई स्वस्थ बनाउन पानीले सहयोग गर्छ। मानव शरीर ७५ प्रतिशत पानीको मात्रा हुने र यसले मासुलाई खुम्चन र खुल्न सहयोग गर्छ। यदि शरीरमा पानीको मात्रा कम भएमा खुटृा पल्टने सम्भावना बढी हुन्छ।
गर्भवती महिलाहरुमा यस्तो समस्या देखिने गर्छ । यो क्रम गर्भवती भएको दोश्रो दोश्रो महिनादेखि चौथो महिनासम्म बढि हुन्छ । गर्भावस्थामा पाठेघरले नशा र रक्तनलीमा चाप बढाउने भएको कारण यस्तो समस्या देखिन्छ । तर गर्भवती महिलाहरुलाई पटक पटक यस्तो भएमा भने अरु नै समस्या समेत भएको हुन सक्छ त्यसैले चिकित्सकको सल्लाह लिन उपयुक्त हुन्छ । शरीरमा बिभिन्न रोगको संक्रमण भएको छ भने पनि खुट्टा बाउडिने हुन्छ ।
ती रोगहरुमा हाइपो थाइराइड, अनियन्त्रित मधुमेह लगायत छन् । मध्यपान गर्नेहरुमा समेत यस्तो समस्या हुने गरेको छ । धेरै मद्यपान गर्ने मानिसको हातखुट्टाको नशामा खराबी आउने हुदाँ यस्तो हुने गरेको चिकित्सकहरुले बताए । यसलाई मेडिकल भाषामा अल्कोहोलिक न्युरोप्याथी भनिन्छ।
यसैगरि औषधि सेवन गरिरहेको अबस्थामा यस्तो भयो भने औषधिको असरका रुपमा समेत यसलाई लिन सकिने विज्ञहरुको बुझाई छ ।पिसाब लगाउने औषधि जसका कारण जलवियोजन हुन सक्छ र खुटृा फर्किने हुन्छ। त्यस्तै कोलेस्टेरोलको मात्रा कम गर्ने औषधि, एन्टिसाइकोटिक औषधि, स्टेरोयड र परिवार नयोजनको लागि खाने चक्की आदिले पनि मासु बाउँडिने र पल्टिने गर्छ।
के कारणले खुट्टा फर्किने गरेको हो त्यो पत्ता लगाएर तपाईले त्यही अनुसार समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ । तर साधारणतया प्रसस्त पानी, फलफूलको रस र दालको रस पिउने गर्दा पनि समाधान हुन्छ । यसैगरि धेरै मध्यपान, कफी र सोडा सेवन नगर्ने, सुत्नुअघि खुट्टालाई तन्काउँदा यो समस्या कम हुन सक्छ।
लामो समयसम्म उभिएको कारण यस्तो भएको रहेछ भने तपाईले उभिने क्रमलाई घटाउनु होला । सुत्दा नरम ब्ल्याङकेट र नरम ओछ्यान प्रयोग गर्ने, सुताइ सहज बनाउने प्रयास गर्ने गर्दा पनि राहत पाइन्छ ।